एकै रातको वर्षाले बस्ती तहसनहस
एकै रातको वर्षाले गोर्खाको पालुङटारस्थित शेराबजार र विर्दी गाउँमा तहसनहस पारेको छ भने स्थानीय बासिन्दालाई पानी खानै पनि समस्या भएको छ।
‘भूगोलका पिता’ बुढाथोकी सरका आखिरी दिन नेपालमा भूगोल शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहमा विस्तार गरेका प्रा. जगतबहादुर सिंह बुढाथोकीले यसलाई प्राज्ञिक विषयका रूपमा स्थापित गर्दै आफ्नो अध्यापन कौशलबाट उम्दा विद्यार्थी उत्पादन गरे।
काठमाडौंमा बालेन्द्र साहको जितको सामाजिक अर्थ काठमाडौंमा बालेन साहकाे जितको अर्थ हो, जात र क्षेत्रभन्दा माथि उनको योजना र थरभन्दा व्यक्तित्वको छनोट भएको छ।
के बालेनले विवेकशीलको ‘क्रेज’ लिएका हुन्? रञ्जु दर्शनाले पाँच वर्षअघि पाएको चर्चा र युवाको समर्थन यति वेला काठमाडौंको मेयरका उम्मेदवार बालेन साहले पाइरहेका छन्। के उनले विवेकशीलको ‘क्रेज’ लिएका हुन्?
ओली सरकार रहेको भए नेपाल श्रीलंका भइसक्थ्यो: कांग्रेस नेपाली कांग्रेसले नेत्री आरजु राणा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइको बचाउ गरेको छ।
राणा, राजा र कांग्रेसले संसारकै गरीब देश बनाइराखे: ओली नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राणा, राजा र कांग्रेसले नेपाललाई संसारकै गरीब देश बनाएको आरोप लगाएका छन्।
यस्तो छ ओलीको ६७ बुँदे चुनावी अपील नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय चुनावमा एमाले उम्मेदवारका लागि मत माग्दै ६७ बुँदे अपील जारी गरेका छन्।
मतदाताले खुट्टा ढोगेको तस्वीरले चर्चामा आएकी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षकी उम्मेदवार मीना विश्वकर्माको चुनावी प्रचारका लागि गाउँले नै आर्थिक सहयोग जुटाइरहेका छन्।
भरतपुर मतपत्र विवादबारे देवी ज्ञवाली भन्छन्- मैले त आफूलाई सम्हालें, अरूलाई यस्तो नहोस्
रेणु दाहाललाई देवी ज्ञवालीको जवाफ, “त्यो दुर्घटना थिएन। एकदमै सुनियोजित, षड्यन्त्रकारी र अपराधपूर्ण क्रियाकलाप थियो। आकस्मिक दुर्घटना हुँदै होइन।”
सरकारको लगानीमा म्यादी प्रहरीले तालीम लिएका छन्। उनीहरूको सीपलाई सदुपयोग गर्न सके सरकार र म्यादी प्रहरी दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ।
‘चेपाङको जीवनस्तर सुगमकै नागरिकको जस्तो बनाउँदै छौं’ ‘चेपाङको जीवनस्तर सुगमकै नागरिकको जस्तो बनाउँदै छौं’